प्रेम एक महत्व अनेक | Kendrabindu Nepal Online News
२ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १३:२७
संसारमा सबै कुराको परिभाषा दिन सहज र सजिलो होला । अरु कुरालाई जति सहज र सजिलो तरिकाले परिभाषित गर्न सकिन्छ प्रेमलाई त्यसरी सकिंदैन । प्रेम मात्र एउटा यस्तो चिज हो जसलाई धेरै भन्दा धेरै शब्दले परिभाषित गरे पनि पूर्णरुप दिन सकिएको छैन ।
र, प्रेमको एउटा रुप यही पनि हो । यो पनि हो कि प्रेम मात्र एउटा यस्तो शब्द हो जसको चर्चा संसारमै धेरै हुन्छ । सबै कुरालाई तार्किकरुपले मुर्तरुप दिए पनि प्रेमलाई त्यसरी सिमित दायरामा राखेर परिभाषित गर्न सकिएको छैन । त्यसैले त होला सबै प्रेमगुरु र दार्शनिकहरुले आ आप्mनै तरिकाले परिभाषित गर्दै आएका छन् ।
Valentine Day, प्रेम
Prevफिल्म फेस्टिभलमा ‘उडेको सपना’ उत्कृष्ट
राष्ट्रिय उमा कुङफु फागुन १६ देखि हुनेNext
व्यंग्य: प्रेम दिवस !
१० रमणीय ‘भ्यालेनटाइन स्पट’ (भिडियो रिपोर्ट)
अनाथ बालबालिकासँग भ्यालेन्टाइन
रोज डे: प्रियसीलाई कस्तो गुलाफ दिने ? (टिप्स)